Somaliland oo ka hadashay heshiiska Dekeda Boosaaso | Baydhabo Online
Somaliland oo ka hadashay heshiiska Dekeda Boosaaso
Xukuumadda Somaliland, ayaa si diiran u soo dhaweysay heshiiskii Maamulka Puntland iyo Shirkadda DP World ku dhex maray Magaalada Dubai ee Wadanka Emirate-ka Carabta, Khamiistii.
Heshiiskan oo muddo 30 sano ah, ayaa Emirate-ka Carabta loogu wareejiyay Dekeda Magaalada Boosaaso. Ujeedka heshiiska, ayaa ah ballaarin iyo casriyayn lagu sameeyo Dekeda Boosaaso.
Wasiirka Warfaafinta Somaliland, Cismaan C/laahi Saxardiid (Cadaani), ayaa sheegay in shacabka reer Puntland ay hambalyeeyen heshiiskaasi, sidaasi si lamid ahna ay iyaguna ugu hambalyeynayan Puntland.
“Sida aad ka war heysaan Dekedii Boosaaso waxay ku wareejiyen DP WORLD. Dad reer Puntland meel kasta oo ay jooggan way hambalyeeyen dowladoodu, anaguna waanu hambalyeynaynaa haddaanu nahay Dowladda Jamhuuriyadda Somaliland. Dadkaas fahmay dariiqa Jamhuuriyadda Somaliland ay qaaday inuu mid saxa yahay.” Ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Somaliland.
Dhanka kale Wasiirka, ayaa Dowladda Somaliya ku eedeeyay in kaalmada ay u qorsheysay Deegaanada Somaliland, uu hadafkeedu yahay in ay ku kala qaybiso shacabka reer Somaliland.
Wasiirka, ayaa soo hadalqaaday in Somaliland ay u gurmatay Somaliya, xilligii ay abaaraha darrani ku dhufteen sanadkii 2011-ka, iyadoo Somaliland ka wadan dano siyaasadeed. Wuxuuna dowladdii hore ku ammaanay in ay si hufan ugu soo gurmatay abaarihii ku dhuftay Galbeedka Somaliland, muddo sanad iyo bar laga jooggo.
Cadaani oo Sabtidii ka soo muuqday Warbaahinta, ayaa sheegay Dowladda Somaliya in aanay kala qaybin karin dadka reer Somaliland, oo sida uu sheegay dad walaalo ah, sidaasi daraadeedna uu ugu baaqayo in ay joojiso siyaasadeynteeda ku aadan gurmadka abaaraha, sida uu yiri.